Waxa laga qabanayo Berlin - Beddelka firaaqada ee weyn | Safarka Absolut
Maxaa laga qabanayaa Berlin
Rumayso ama ha rumaysan, caasimadda Jarmalka waxay leedahay waxyaabo aan dhammaad lahayn oo la bixiyo. Marka markaan isweydiino, waxa laga qabanayo berlin, shaki is daba joog ah ayaa soo ifbaxaya. Laakiin waxaan si dhakhso leh u ogaanay in geesaha ay leeyihiin waxyaabo badan oo ay noo sheegi doonaan, xilligan xaadirka ah ee ku dhex milmay waayihii hore waxaanan ku raaxeysan doonnaa jawi u gaar ah.
Dabcan, markaan cag dhigno Berlin, waa inaan ka fikirnaa inaan la heli doonin waqti caajis ah. Sababtoo ah kaliya maahan booqo meelaha astaanta, laakiin si loo ogaado kuwa kale oo badan oo iyaguna xiise weyn u qaba, in lagu raaxeysto caloosha, barxadaha ama suuqyadeeda. Xagee ka bilownaa?
1 Lug ku dhex maro fagaaraha ugu quruxda badan magaalada Berlin
2 Ku raaxayso dhadhanka 'currywurst'
3 Fuula qubbadda dhalada ee Norman Foster
4 Ku raaxayso 'Little Istanbul'
5 Xarunta dukaamaysiga ugu caansan
6 Jasiiradda matxafka
7 Dhex dhexaad ah Badeschiff
8 Axad gorgortan ah oo ka socota Mauerpark
Lug ku dhex maro fagaaraha ugu quruxda badan magaalada Berlin
Sababtoo ah socodku marwalba wuu noogu fiican yahay inaan ku nasano oo aan indho indheyn yar sameynno. Marka, maxaa ka wanaagsan sida loo tago waxa loo arko fagaaraha ugu quruxda badan magaalada Berlin: Gendarmenmarkt. Waxay ku taal bartamaha Berlin halkaasna waxaan kula kulmi doonnaa Konzerthaus, oo ah goobta xafladda. Sidoo kale halkaas, waxaan arki doonnaa Kaniisadda Faransiiska iyo Kaniisadda Jarmalka. Qurux aanad iska ilaalin karin inay kuu keento xusuus, xitaa qaab muuqaal ah ama xusuus ah.
Ku raaxayso dhadhanka 'currywurst'
Meel kasta oo aan joogno, waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan ku raaxeysanno meelaha ay joogaan suxuunta caadiga ah. Marka markaan ka fikirno waxa lagu sameeyo Berlin, ma diidi karno tan sidoo kale. Waa saxan cunto deg deg ah oo ka kooban hilib doofaar, kaas oo marka hore la kariyo ka dibna la shiilo. Waxaa weheliya maraqa yaanyo iyo curry. Sidoo kale waxaa badanaa lagu qaataa shiilanka Faransiiska.
Fuula qubbadda dhalada ee Norman Foster
Sida qubbad, waxay ku taal qaybta ugu sareysa Reichstag dhismaha. Waxaa qaabeeyay Norman Foster waana astaan ​​muujinaysa dib u midoobida Jarmalka. Waxaa lagu sameeyay muraayad, waxay leedahay muuqaal dusha sare ah, laakiin si aad halkaas u gaartid waa inaad ku marin kartaa marinno kala duwan oo qaanso iyo bir ah. Dabcan, sidoo kale waa inaad sameysid boos celin hore. Mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee Berlin.
Ku raaxayso 'Little Istanbul'
Xaafadaha caanka ah way camiran yihiin markay ka fikirayaan waxa laga sameeyo Berlin. Laakiin way cadahay inay tani noqotay goob moodada. Waxaas oo dhan sababtoo ah tirada dadka Turkiga ah ee ku jira. Tani waxay ka dhigeysaa inay leedahay magaca 'Little Istanbul' ama rubuc turkish. Aynu nidhaahno waa dhinac kale oo magaaladu ina tusi karto. Meel ka duwan, oo leh midabbo, oo noo geynaya dhul kale. Waxaad ka heli doontaa Kreuzberg.
Xarunta dukaamaysiga ugu caansan
Waa run in marka aan u safrayno magaalo sida Berlin oo kale ah, waxa ugu horreeya ee aan ka fikirno ay tahay ku raaxeysiga dhismaheeda iyo meelaha kale ee astaanta u ah. Laakiin maanta, waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno, annagoo tixgelinayna waxyaabo kale oo aan qaban karno. Mid ka mid ah ayaa ah inuu ku raaxeysto mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ee ugu caansan meesha ugu weyn Yurub, KaDeWe. In kasta oo lagu burburay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, haddana dib ayaa loo dhisay oo wuxuu noqday astaan ​​kale.
Waxay ku wareegsan tahay wabiga 'Spree' oo sida magaceedaba ka muuqata, waxaan dooneynaa inaan helno matxafyo kala duwan. Labada matxaf ee hore iyo kuwa cusub, Old National Gallery, Bode ama Pergamon Museum iyo James Simon Gallery Waxay qayb ka yihiin jasiiraddan iyo safarkan oo waliba aan qashin lahayn. Laakiin maahan oo keliya matxafyada laftooda, laakiin jidkaaga ayaad sidoo kale la kulmi doontaa Katidralka Berlin.
Dhex dhexaad ah Badeschiff
Way cadahay in markaan ka hadlayno xagaaga, waa inaan sidoo kale sheegnaa in nashaadaaduhu sii kordhayaan. Wixii laga fikiray wax walboo iyo in ka badan, gelinta a Barkadda ku hor taal Arena State. Waxay leedahay dabaqyo, sidoo kale hammocks iyo muusig. Marka waxay noqon kartaa mid ka mid ah howlaha ugu wanaagsan marka qorraxdu dhacdo.
Axad gorgortan ah oo ka socota Mauerpark
Waa run oo sidan oo kale loo yidhi, hubaal waad ogaan doontaa inaan ka hadlayno beero. Mauerpark waa baarkinka dadweynaha, halkaasoo uu mari jiray darbigii Baarliin, sidaa awgeed waxaa loo yaqaan baarkinka derbiga. Waa hagaag, waa mid kale oo ka mid ah meelaha inta badan dadku ku badan yihiin layaabna ma leh. Dhexdeeda waxaan ka heli karnaa waxqabadyo kala duwan, halkaas oo muusiggu ka mid noqon doono halyeeyada ugu muhiimsan. In kasta oo aan sidoo kale heli doonno riwaayado isdaba joog ah. Haddii aad tagto Axad, waxaad ku raaxeysan kartaa nooc suuq ah oo leh nooc kasta oo dhar ah, in kasta oo dharka guridda loo yaqaan ay u badan yihiin. Runtii, waxaad kaheli doontaa heshiisyo layaableh oo marka aad ku daasho ama ku daasho tukaamaysiga, waxaa sidoo kale jira goobo cuntada lagu iibiyo. Sidii aan soo sheegnay, markaan ka fikirno waxa laga qabanayo Berlin, waxaan had iyo jeer diirada saarnaa isla qodobada, laakiin nolol badan ayaa ka dambeysa iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxaa laga qabanayaa Berlin
Niagara Falls Tour oo ka socda New York